Ungasusa njani usetyenziso olusele lufakiwe kwi-Android | I-Androidsis
Ungasusa njani ii -apps ezifakwe kwangaphambili kwi-Android
UIgnacio Lopez | 05/04/2021 14:00 | Ukusetyenziswa kwe-Android, Tutorials
Susa usetyenziso olusele lufakiwe kwi-Android, yaziwa njenge bloatware, ibisoloko (kwaye ngelishwa, izakuqhubeka ukuba) yingxaki okwangoku akukho mzimveliso uzimisele ukuphelisa ngokupheleleyo iiterminal zayo. Ngethamsanqa, abaqhubi bayilahlile le nto intiyo kwiminyaka eyadlulayo kwaye namhlanje kufuneka silwe nesoftware yomenzi.
Kodwa, asikhange sihlangane kuphela nale ngxaki kwi-Android, kodwa ikwakhona nakwi-iOS, kuba iApple inyanzelisa ukuqhubeka nokubandakanya usetyenziso ekungekho mntu ulusebenzisayo njengokufaka i-imeyile, iiLizwi, iCompass, iStock Market. I-Android.
Xa sithetha nge-bloatware okanye isoftware efakelwe ngaphambili abasebenzisi abaninzi abangayisebenzisiyo konke konke, akufuneki sithethe nje kuphela ngezicelo ezifakelwa ngabavelisi, kodwa kufuneka sithetheodas kwaye nganye yesicelo uGoogle asibeka kunye nesihlangu Kuzo zonke ii-smartphones ezifikelela kwintengiso nge-Android.
1 Susa ii -apps ezifakwe kwangaphambili kwi-Android ene-ADB
1.1 Nika amandla ukhetho lonjiniyela
1.2 Nika amandla imo yokulungisa imodi ye-USB
1.3 Khuphela usetyenziso lwe-ADB
1.4 Cima usetyenziso
2 Susa ii -apps ezifakwe kwangaphambili kwi-Android nge-AppControl
3 Khubaza iiapps kwi-Android ngaphandle kokuzikhupha
Susa ii -apps ezifakwe kwangaphambili kwi-Android ene-ADB
Iminyaka eliqela, abavelisi abaninzi bathintele abasebenzisi ekufikeleleni kwinkqubo yokwenza utshintsho ukwenza iiROM zesiko ... Ngethamsanqa, ukungabinayo imvume yokungena kwiiterminali akuyongxaki, kuba sinezinye iindlela ezisivumela ukuba senze umsebenzi ofanayo: khipha usetyenziso olusele lufakiwe kwisiphelo sethu.
Sifuna kuphela isicelo sonjiniyela weGoogle ADB, isicelo esithi, ngokusebenzisa imiyalelo elula yesiphelo, esivumela ukuba sisuse zonke izicelo esingafuniyo ukuzibona kwisixhobo sethu. Ukususa usetyenziso olusele lufakiwe ngaphandle kokushiya umkhondo kwisixhobo sethu se-Android, kufuneka Yenza amanyathelo ama-4 endiwanike iinkcukacha ezingezantsi:
Nika amandla ukhetho lonjiniyela
Into yokuqala ekufuneka siyenzile Yenza ukhetho lonjiniyela, kuba ngaphandle kwezi zenziwe zasebenza, asizukukwazi ukwenza inyathelo elilandelayo apho kufuneka sisebenzise imo yokulungisa imeko ye-USB.
Ukwenza ukuba iinketho zokuphucula zisebenze kwi-Android, kufuneka singene kwimenyu apho inombolo yokwakha yenguqulo yethu ye-Android. Olu lwazi luhlala lufumaneka kwiNkqubo okanye kwiNkqubo yoLwazi kwifowuni.
Ukuba awukwazi ukufumana olu khetho kwiimenyu, unako yifumane kwibhokisi yokukhangela ifunyenwe phezulu kwiMenyu yezicwangciso, ngegama "ukuhlanganiswa" ngaphandle kweengcaphuno.
Nika amandla imo yokulungisa imodi ye-USB
Inyathelo lesibini ekufuneka silwenzile vumela imo yokulungisa iphutha le-USB, imowudi esivumela ukuba sifumane ukufikelela kwi-USB kwisiphelo sendlela. Ngaphandle kweli nyathelo, isicelo esiza kusisebenzisa asinakuze sikwazi ukunxibelelana nesixhobo.
Ukwenza imowudi yokulungisa imeko ye-USB isebenze, singena kwifayile ye- Ukhetho lomphuhlisi iyafumaneka kwimenyu yeNkqubo, sijonga icandelo lokuLungisa ingxaki kwaye senze utshintsho ukususa iibhagi kwi-USB.
Khuphela usetyenziso lwe-ADB
Kwinyathelo elilandelayo, kuya kufuneka sikhuphele usetyenziso lwe-ADB koku unxibelelwano kwaye ucofe ku Ungazikhuphela njani izixhobo zeQonga le-SDK for Windows / IMac o Linux kuxhomekeke kwinkqubo yokusebenza esiyisebenzisayo. Emva kokukhutshelwa, siyikhuphula ifayile (akukho nto kufuneka ifakwe).
Into yokuqala ekufuneka siyenzile, emva kokwenza onke amanyathelo achazwe apha ngasentla, ngu qhagamshela izixhobo zethu kwikhompyuter. Ngelo xesha, umyalezo uza kuboniswa kwiscreen esimemela ukuba sivumele ukulungiswa kwe-USB ngesitshixo seRSA. Le nkqubo isebenza ukuqinisekisa ukuba sinokufikelela kwisixhobo, ukuba isixhobo sesethu ngokwenene.
Emva koko, sivula iwindow yomyalelo wenkqubo yethu yokusebenza kwaye singene kwindlela apho sikhuphele khona iADB ukuqala inkqubo eya kusivumela susa usetyenziso lweengcambu kwisixhobo sethu ngaphandle kokushiya nawuphi na umkhondo.
Ke sibhala kwilayini yomyalelos "adb shell pm uluhlu lweephakheji" ngaphandle kwezicatshulwa ukubonisa uluhlu nazo zonke izicelo ezifakwe kwikhompyuter yethu.
Nje ukuba silifumane igama lesicelo esifuna ukusisusa, sibhala "adb shell pm uninstall -k -user 0 package-name" ngaphandle kwezicatshulwa. Kufanele si buyisela igama lephakheji ngegama lesicelo esifuna ukusikhupha, ekule meko yile Iphepha elinamaphepha.bhokisi.app.
Susa ii -apps ezifakwe kwangaphambili kwi-Android nge-AppControl
Inketho elula, efumaneka kuphela kwiWindows, kukusebenzisa usetyenziso lwe-ADB App, usetyenziso oluthi rbuyisela ujongano lomyalelo ngenye yeewindows, apho sinokukhetha ngokukhawuleza usetyenziso esifuna ukusisusa kwifowuni yethu.
Ukusebenzisa le sicelo, kufuneka kuqala Nika amandla ukhetho lonjiniyela y Nika amandla imo yokulungisa imodi ye-USB, njengoko sichazile kwicandelo elidlulileyo.
Sebenzisa iinketho zonjiniyela
Ukwenza ukuba iinketho zokuphucula zisebenze kwi-Android, kufuneka singene kwimenyu apho inombolo yokwakha (ngaphakathi kwiNkqubo / kwimenyu yolwazi yefowuni) yenguqulo yethu ye-Android kwaye ucinezele amatyeli aliqela de umyalezo uqinisekise ukuba sisebenze ngokuchanekileyo ukhetho kubaphuhlisi.
Nje ukuba sisebenze olu khetho, sikhuphela usetyenziso Ulawulo lwe-ADB App, isicelo okwangoku ifumaneka kuphela kwiWindowsKe ngoko, awusebenzisi le nkqubo yokusebenza, kuya kufuneka usebenzise indlela yelayini yomyalelo echazwe kwicandelo elidlulileyo.
Nje ukuba sikhuphele usetyenziso, sidibanise isixhobo sethu se-Android kwiPC kwaye siyayiphumeza. Isicelo Ulawulo lwe-ADB yoSetyenziso luyaphunyezwa kwaye ibandakanya zonke iifayile eziyimfuneko ukuze zisebenze, ke ayizukufakwa kwikhompyuter yethu.
Xa uyiqala okokuqala, iya kukhuphela uthotho lweefayile kunye nee icon yezicelo zokubonisa ulwazi ngendlela ebonakalisa ngakumbi kwaye eneenkcukacha.
Isicelo siza kubonisa iimenyu ngesiNgesi, ulwimi esinokuthi silutshintshe ngaphezulu kwesicelo, cofa koonobumba be-ES ukubonisa zonke iilwimi ezikhoyo, phakathi kwazo ISpanish ifakiwe, njengoko sinokubona kule mifanekiso ilandelayo.
Ukususa usetyenziso kwisixhobo sethu, kufuneka sikrobe ngefestile apho kuboniswa zonke usetyenziso kwisixhobo sethu, zikhethe kwaye uye kwikholam yasekunene.
Kule kholamu, sikhetha Khipha kwibhokisi yokukhetha, asikhangeli ukhetho Gcina idatha kunye ne-cache (ukucima yonke idatha yesicelo) kwaye ucofe kuKhipha.
Umyalezo uza kuboniswa usazisa ukuba sisusa nasiphi na isicelo kwinkqubo, sinokunyanzelwa ukuba sibuyisele isixhobo kwasekuqaleni, Oko kuthetha ukuphulukana nedatha nganye esiyigcinileyo. Cofa ku Ewe.
Ukuba sifuna ukubuyisa ezo zicelo emva kokuba zikhutshiwe, isicelo siyasimema ukuba sikwenze ikopi yokhuseleko. Kuyacetyiswa kodwa akunyanzelekanga.
Nje ukuba ususe iiapps, umyalezo wokumisela uya kubonakala kwi-app.
Khubaza iiapps kwi-Android ngaphandle kokuzikhupha
Le yinkqubo Kulula xa ususa usetyenziso kwinkqubo yethu, kodwa ishiya umkhondo, ukuze sikwazi ukufumana iindlela ezimfutshane kwizicelo esizikhupheleyo kwikhompyuter yethu ngelixa sisebenzisa i-terminal yethu, iindlela ezimfutshane ezisimemayo ukuba siphinde sisebenzise isicelo kwakhona.
Nangona kuyeyona ndlela ilula, ishiya umzila sinokufumana ngokululaNgenxa yoko, lukhetho lokuqala olukhoyo ngokulula kodwa olona lunconyelweyo ukuba sifuna ukulibala ngokupheleleyo malunga nokusetyenziswa komenzi kuzo zonke izixhobo zakhe.
Ukucima usetyenziso kwi-Android, kufuneka singene kuseto lwezixhobo zethu, cofa ku Izicelo kwaye ukhethe usetyenziso esifuna ukulenza lingasebenzi. Ngaphakathi kukhetho lwesicelo ukhetho Khipha / Khubaza.
Ukuba ukhetho Ukukhubazeka kungwevu, ayifumaneki, ke kuphela kwendlela onokuyenza ngayo kukusebenzisa usetyenziso lwe-ADB nokuba kungumgca wokuyalela (okhoyo kwiWindows, i-MacOS kunye neLinux) okanye nge-ADB AppControl application, usetyenziso olufumaneka kuphela kwiWindows.
Zonke iindlela endikubonise zona kweli nqaku, zisivumele ukuba siziphelise ngokupheleleyo okanye ngokungaphelelanga usetyenziso kwifowuni yethu, usetyenziso oluthi Ziyakufumaneka kwakhona ukuba sibuyisela isixhobo sethu.
Kungenxa yokuba xa inkqubo yenziwa, Inkqubo ibuyisela iROM egciniweyo kunye nohlobo oluhlaziyiweyo lwenkqubo yokusebenza ngaphandle kokuba sibuyisela ingxelo yangaphambili yenkqubo yokusebenza kwiROM yomenzi wayo.
Ekuphela kwendlela yokukwazi ukushenxisa usetyenziso olufakelweyo ngaphambili kwizixhobo zethu eziphathwayo kunangaphambili, ngokutshintsha iROM yesixhobo, into ethi, ngenxa yokusikelwa umda kwabavelisi, asinakwenza nangayiphi na indlela, ubuncinci kwizixhobo zamva nje.
Ngokusebenzisa iROM eyahlukileyo kunaleyo inikwa ngumenzi, kubandakanya kuphela usetyenziso olufakwe ngumenzi wayo. Ukuba unesixhobo esineminyaka embalwa ubudala kwaye ufuna ukusinika ithuba lesibini, ukususa usetyenziso olufakelweyo ayisosisombululo osifunayo, kuba into oyifunayo faka iROM ehambelana nezixhobo zakho ngokugqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungasusa njani ii -apps ezifakwe kwangaphambili kwi-Android
[VIDEO] Indlela yokwenza ngokwezifiso ukuvala isikrini seSamsung Galaxy
Uyifaka njani i-adblock kwiChannel ye-Android